Topson talks about how good MATUMBAMAN is - Real Gaming Myanmar
MATUMBAMAN ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့ Topson
MATUMBAMAN ဟာ 2015 ခုနှစ် 2019 ခုနှစ်အထိ Team Liquid ရဲ့ Mid နဲ့ Safe Lane တွေမှာ Hero Pool ကျယ်ကျယ် Individual Skill ကောင်းကောင်းနဲ့ အသင်းကိုအောင်မြင်မှုများစွာရရှိအောင် အသုံးတော်ခံပေးနိင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေထဲက အမြင့်မားဆုံးကတော့ TI7 ဖြစ်ပါတယ်။
OG နဲ့အတူ TI8 နဲ့ TI9 တို့ကိုရယူခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ Pro ကစားသမားဘဝကနေအနားယူပြီး Streaming ပဲလုပ်နေတဲ့ Topson က သူ MATUMBAMAN နဲ့ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့စဉ်က ဘယ်လောက်ထိကြောက်လန့်ခဲ့ရကြောင်းကိုပြောပြီး ချီးကျူးထားတာပါ။
Topson က သူ့အနေနဲ့ တဘက်ကလာတဲ့ Player က ကြောက်လန့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာက အရေအတွက်အရမ်းနည်းပြီး MATUMBAMAN ကိုတော့ သူ့ရဲ့ Hero Pool ကျယ်ပြန့်မှုကြောင့် ကြောက်လန့်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူနဲ့ OG အသင်းသားတွေအနေနဲ့ တဖက်က Matu ပါရင် Draft လုပ်ရင် အကြီးအကျယ်ခေါင်းစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။
အကြောင်းကတော့ Matu အနေနဲ့ Mid Lane မှာ Topson ဘယ်ဟီးရိုးကိုင်ကိုင် Counter လုပ်နိင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Matu က အဲ့လောက်ထိပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေအတွက် ကြောက်ရွံစရာကောင်းတဲ့အထိကောင်းခဲ့ပေမယ့် Team Liquid(လက်ရှိ Nigma Galaxy)Squad ကနေ 2019 ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
Matu အဲ့လိုထွက်သွားမှပဲ သူနဲ့ OG တို့အနေနဲ့ သက်ပြင်းချနိင်ခဲ့တယ်လို့ Topson က ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Livestream မှာ Topson က သူ့အနေနဲ့ TI8 စတင်ခါနီးကနေစခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ OG ကစားသမားဘ၀ ၂ နှစ်တာလောက်မှာ MATUMBAMAN နဲရင်ဆိုင်ဖို့ကို ကြောက်လန့်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောထားခဲ့တာပါ။
MATUBMANA ရဲ့ Signature တွေဖြစ်တဲ့ Lone Druid, Broodmother နဲ့ Venomancer တို့လိုဟီးရိုးတွေက Topson ရဲ့ Hero တွေကို Counter နိင်လို့ Liquid နဲ့တွေ့တိုင်း OG က အခက်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် Matu နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတိုင်း Strong Laner တွေပဲအသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“Matu က အမြဲတမ်း တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုဒုက္ခပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Liquid နဲ့တွေ့ရင် Lane မှာ Strong တဲ့ဟီးရိုးတွေဖြစ်တဲ့ Troll Warlord တို့ Pangolier တို့လိုဟီးရီုးတွေပဲကစားခဲ့တာပါ”
ဒါပေမယ့် TI9 မစတင်ခင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာတော့ Team Liquid က MATUMBAMAN ကို သူတို့ရဲ့ Roster ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
Topson က သူတို့အနေနဲ့ အဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်ပျော်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“အဲ့အချိန်လောက်တုန်းက Matu ကို သူတို့ Kick လိုက်တာပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် အဲ့အချိန်ကနေစလို့ သူတို့နဲ့ကစားရတာ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းသွားပြီး တော်တော်လေးလည်းလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်”
MATUMBAMAN ဟာ Liquid(Nigma) ကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့ 2019 ကနေစလို့ Team Secret နဲ့ လက်ရှိ Team Liquid တို့မှာ Safe Lane ပဲကစားပေးခဲ့ပေမယ့် Kuroky တို့ Squad နဲ့အတူရှိစဉ်ကာလမှာတော့ Miracle အတွက်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို Lane တွေလဲလှယ်ပြီးတော့ ကစားပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
Matu က TI9 မှာတော့ Chaos နဲ့ဘဝပျက်ခဲ့ပေမယ့် TI10 မှာ Team Secret နဲ့တတိယရခဲ့လို့ လူရိုသေရှင်ရိုသေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို Kick ခဲ့တဲ့ Kuroky တို့ ၁ သိုက်ကတော့ အကြီးအကျယ်ပျားတုတ်နေပါတယ်။
TI9 မှာ w33 အားကိုးနဲ့ ဒုတိယရခဲ့ပေမယ့် TI10 မှာတော့ ဝင်ခွင့်တောင်မရခဲ့ပါဘူး။
လက်ရှိ 2021-2022 DPC မှာလည်း Season 1 မှာ Major ကစားခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့သလို Season2မှာဆို တန်းပါဆင်းရတော့မှာပါ။
Matu ရဲ့နေရာကိုအစားဝင်ခဲ့တဲ့ w33 နဲ့ iLTW တို့က သူတို့ဟာသူတို့တော့ကောင်းကြတယ်လို့ဆိုနိင်ပေမယ့် Matu ရဲ့နေရာကိုတော့ လုံးဝအစားထိုးနိင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
Nigma အခက်အခဲတွေ့လေလေ Matu ရဲ့တန်ဖိုးက ပိုသိသာလာလေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မကြာသေးမီကပဲ Team Liquid Mid Laner ဟောင်း Qojva က ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ Matu ကို Kick ခဲ့တာက ကြီးမားတဲ့အမှားဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ဘက်အသင်းနဲ့ကစားသမားတွေက အမှန်ကိုသိပြီး ဝေဖန်ထောက်ပြနေပေမယ့်လည်း ခေါင်းမာတဲ့ Kuroky ကတော့ အခုအချိန်ထိမိုက်လုံးကြီးနေဆဲပါခင်ဗျာ။
MATUMBAMAN has been at Team Liquid Mid and Safe Lane 2015-2019 to help the team withalarge hero pool and good individual skills to achieve great success.
The highest of these achievements is the TI7.
Topson, who recently retired from professional scene praised how terrified he was when he faced MATUMBAMAN.
Topson said that the number of players he was afraid of was so small that he was afraid of MATUMBAMAN because of the size of his Hero Pool.
He and his OG team members said that it would have beenahuge challenge to draft Liquid with Matu.
Because Matu was able to counter Topson heroes in Mid Lane.
Matu was so terrifying to rivals, but he was removed from the Team Liquid (now Nigma Galaxy) Squad in 2019.
Topson added that he and OG could only sigh of relief when Matu left.
Inarecent Livestream, Topson stated that he was afraid to face MATUMBAMAN during his two-year OG career, which began shortly before the launch of TI8.
Heroes such as Lone Druid, Broodmother, and Venomancer, such as MATUBAMAN’s signatures, were able to counter Topson’s heroes, and OG struggled every time they encountered Liquid.
That’s why Topson used strong Laners every time he faced Matu.
“There was always something that he could do to ruin me so I just played heroes like Troll, and Pango – strong laners.”
But justafew weeks before the launch of TI9, Team Liquid removed MATUMBAMAN from their roster.
Topson said they were “delighted” to hear the news.
“But then they kicked Matu and we were like – Okay, they lost their star player – the one who makes them scary.
And then playing into them was so fun and easy,” Topson said.
Although MATUMBAMAN has only played Safe Lane on Team Secret and the current Team Liquid since leaving Liquid (Nigma) in 2019, but while Kuroky and Squad were with the Squad, he switched lanes as needed for Miracle.
Matu got trouble in chaos in TI9, but he got third place in TI10 with Team Secret While Kuroky’s Squad was in deep trouble.
TI9 came in second with the w33, but was not even allowed to enter the TI10.
In 2021-2022 DPC Nigma missed the Major Play in Season 1 and will be relegated in Season 2.
W33 and iLTW, which have replaced Matu, may say they are good, but there is no substitute for Matu.
The more Nigma struggles, the more valuable Matu becomes.
Qojva,aformer Team Liquid Mid Laner, recently criticized Nigma for kicking Matu in 2019 asabig mistake.
Despite such criticisms from rivals and players, the stubborn Kuroky is stillafool.